Gen. Dhagabadan Oo Digniin Culus Siiyay Ra’isal Wasaare Gaas. | Anti-Tribalism
← Shir lagu diidanyahay Dastuurka qabyada ah oo ay isugu yimaaden Beelaha hawiye oo ka dhacay Magaaladda Lewiston, gobolka Maine
Ma aqbaleyno in nalagu sanduleeyo dastuur ka horjeeda danaha ummada” →
Gen. Dhagabadan Oo Digniin Culus Siiyay Ra’isal Wasaare Gaas.
30 April, 2012-Ra’isal Wasaraha Dowladda KMG Prof. C/wali M. Cali Gaas oo ah musharax u taagan tartanka madaxweynenimada Soomaaliya, beryahana waday xulashada odayaasha Soomaaliyeed ee uu isleeyahay dhankaaga ayay jiraan ayaa maanta la kulmay digniin culus oo uga timid abaan-duulaha ciidamada xoogga dalka Gen. C/karin Yusuf Adan Dhagabadan. Digniintan ayaa timid kadib markii Ra’isal Wasaare Gaas uu qaaday talaabo uu ku tirtarayo qaar ka mid ah liiska odayaasha beesha Dir, taasoo keentay in Gen. Dhagabadan uu ka caroodo faragalinta Ra’isal Wasaaraha kadibna uu si toos ah ugala hadlay inuu faraha kala baxo xulitaanka odayaasha Soomaaliyeed. “ma waxaad tahay kaaba-qabiil Soomaliyed, mise Ra’isal Wasaare Soomaaliyeed” ayuu ku qeyliyay Gen. Dhagabadan.
Ra’isal Wasaare Gaas ayaa ka raali galiyay Janaraalka arinkaas, wuxuna balan qaaday inuusan mar dambe ka hadli doonin xulashada odayaasha Direed. Ra’isal Wasaare Gaas ayaa horay ugu soo guuleystay inuu kala badalo qaar ka tirsan ergada odayaasha Hawiye, kadib markii uu ka tiray liiska dhowr oday oo uu u arkay inay khatar ku yihiin guusha musharaxnimadiisa. Madaxweyne Sh. Shariif ayaan wali wax jawaab ah ka bixin talaabada uu Ra’isal Wasaare Gaas ku tirtiray qaar ka mid ah ergooyinka odayaasha Hawiye.
Waxa ka jira Muqdisho is-qabqabsi iyo dood farabadan oo sababtay qilaafaad xeel dheer kadib markii lagu heshiin waayay qaabka loosoo xulayo ergooyinka beelaha, oo siyaasi walba uu isku dayayo inuu soo saarto odayaal uu filayo inay usoo xulaan xildhibaano hadhow codka siiyo siyaasigaas.